Suning Group oo wacad mu maray inay figta sare ee kubadda caalamka kusoo celinayaan Inter Milan – Gool FM
Chelsea oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2020/21.… + SAWIRRO
Henderson oo sheegay loolanka cusub ay wajihi doonto Liverpool kaddib markii ay ku guuleysatay Premier League
Suning Group oo wacad mu maray inay figta sare ee kubadda caalamka kusoo celinayaan Inter Milan
Raage November 18, 2016
(Milano) 18 Nof 2016 – Maamulka Inter Milan ee Steven Zhang iyo Jun Liu ayaa ballan qaaday “inay kooxda Nerazzurri kusoo celiyaan figta sare ee kubadda cagta caalamka.”
Nimankan oo wakiil ka ah sharikadda iibsatey saamiga ugu badan Inter Milan ee Suning Group ayaa ballan ku qaaday inay waqti badan ku qaadan doonaan magaalada Milano si ay hubaal uga dhigaan in maamulka kooxdu ay u dhowaadaan kooxda iyo Stefano Pioli.
“Inter waa mas’uuliyad wayn oo saaran Suning. Waxaannu dareensannahay inaannu mashruucan si dhab ah ugu jirno. Ujeedkeennu waa inaannu natiijo wanaagsan gayaysiinno kooxda oo aan tiigsanno bartilmaameedyo waawayn,” ayay nimankani u sheegeen Inter Channel.
“Inter waa naadi Talyaani ah oo saldhiggeeddu Milano yahay, damaca Sunnin waa inaannu horumarinaa kooxda Inter si marka aannu u xoojinno ay ugusoo laabato masraxyada caalamka, falsafadeennu waa sare u qaadista kooxda Nerazzurri, waana naga dhab arrintaasi.” ayay raaciyeen.
Steven Zhang ayaa xaqiijiyay inuu Af-Talyaaniga u baran doono sida ugu dhaqsiyaha badam, isagoo sheegay inuu 70% uu waqtigiisa ku qaadan doono Talyaaniga.
Jun Liu ayaa loo magacaabay guddoonka cusub ee Inter kaddib markii uu is casiley Michael Bolingbroke oo isaga xilkan uga horreeyay.
''Heshiiskii Juve & Berardi weli wuu taagan yahay'' - Maareeyaha Sassuolo
Laacibiinta Juventus ee wajahaysa Pescara oo la magacaabay! (Yaa maqan yaase soo laabtay?)